Iindaba -Indlela yokusela imatcha kunye nefuthe leti yematcha
Indlela yokusela i-matcha kunye neziphumo zeti ye-matcha
Abantu abaninzi bakhetha i-matcha, kwaye bayathanda ukuxuba umgubo we-matcha xa usenza iikeyiki ekhaya, kwaye abanye abantu basebenzisa i-matcha powder ngokuthe ngqo xa besela. Ke yeyiphi indlela echanekileyo yokutya i-matcha?
Matcha waseJapan: Hlamba isitya okanye iglasi kuqala, emva koko uthele icephe le-matcha, uthele malunga ne-150ml yamanzi afudumeleyo (iidigri ezingama-60 zanele), uphehle matcha ngebrashi yamatcha, ungangcamla incasa yoqobo yomsitho waseJapan Matcha.
Zithini iziphumo zematcha
(1) Ukusela i-matcha ukuphucula ukubona
UMatcha usisityebi kwi-pro-vithamini A, kwaye ivithamini A sisichukumisi esibonakalayo. Ubuntununtunu buthetha “ukuphuculwa kwamehlo”.
(2) Sela i-matcha ukuthintela ukubola kwamazinyo
I-Fluorine yenye yezinto ezilandelwayo ezifunekayo emzimbeni womntu. Ukungabikho kwe-fluoride kuya kuchaphazela impilo yamathambo kunye namazinyo, kwaye i-matcha sisiselo sendalo kunye ne-fluoride engaphezulu.
(3) Sela i-matcha ukuze uhlaziye ingqondo yakho
IMatcha iqulethe inani eliphakathi le-caffeine, ke inefuthe lokukhuthaza inkqubo ye-nervous system. Ngevumba nevumba leoli eguqukayo kwimatcha, iyahlaziya kwaye iyahlaziya.
(4) Sela i-matcha ukongeza kwi-vitamin C
Umsebenzi wevithamini C uye wafundwa kakhulu kule minyaka idlulileyo, kwaye kuvunyelwene ukuba ukongeza ivithamin C eyaneleyo kuluncedo olukhulu ukukhusela izifo kunye nokomeleza umzimba. IMatcha iqulethe ikhadi elityebileyo levithamini C. Iqondo lobushushu leti le-matcha akufuneki libe phezulu kakhulu, ukuze ivithamin C ingatshatyalaliswa. Ukusela matcha yeyona ndlela yokuxhasa ivithamin C. yendalo
(5) Ukusela mI-atcha ye-diuresis kunye nokuthintela amatye
I-caffeine kunye ne-matcholine sesinye sezithako kwimatcha, zinokuthintela ukubuyiselwa kwakhona kweetyhubhu zezintso. Ke ngoko, sisilonda esifanelekileyo, esingenakucoca kuphela, esomeleza ukusebenza kwezintso, ukuze iityhefu zezintso kunye nemveliso yenkunkuma ikhutshwe ngokukhawuleza, kodwa ikwanokuthintela isifo sezintso kunye namatye.
(6) Ukusela i-matcha ukuphucula ukusebenza kwesisu
IMatcha iqulethe ii-alkaloids, esisiselo esinxilisayo sendalo esinokuthomalalisa ukutya okune-asidi kunye nokugcina i-pH eqhelekileyo (i-alkaline encinci) yamanzi emzimbeni. Ukongeza, iitannins kwi-matcha zinokuthintela ibacteria, i-caffeine inokuphucula ukugcinwa kwejusi esiswini, kunye neoyile enencasa nayo inokunyibilikisa amanqatha kwaye incede ukwetyisa, ke ukusela i-matcha kunesiphumo sokuphucula ukusebenza kwamathumbu.
(7) Ukusela matcha ukunciphisa umonakalo radiation
Ikatekini e-matcha inefuthe lokunciphisa i-radioactive element strontium kunye nokunciphisa ukonakala kwemitha ye-atom. Inokulwa ukungcoliseka kwemitha kwizixeko zanamhlanje, ke yaziwa ngokuba "sisiselo sobudala beatom".
(8) Sela i-matcha ukuthintela uxinzelelo lwegazi
I-Matcha ityebile kwiikatekini, ngakumbi i-matcha, enezinga eliphezulu lomsebenzi we-vitamin P, onokuphucula amandla omzimba wokuqokelela iivithamini, ukunciphisa ukuqokelelana kwamafutha egazini nakwisibindi, kunye nokugcina ukuxhathisa okuqhelekileyo kwee-capillaries ukusela iti yematcha kuyanceda ekuthinteleni nasekunyangeni uxinzelelo lwegazi, iarteriosclerosis kunye nesifo sentliziyo.
(9) Ukusela i-matcha ukunciphisa i-cholesterol kunye nokuthintela ukutyeba kakhulu
I-vitamin C kwi-matcha iluncedo ekwehliseni i-cholesterol yegazi, ukuphucula ukomelela kunye nokuqina kwemithambo yegazi, kunye nophando kwizangqa zonyango zaseFrance naseJapan ziye zaqinisekisa ukuba ukusela i-matcha kunganciphisa i-cholesterol kwaye kunciphise umzimba.